Amaphepha e-Acrylic, i-Acrylic Mirror Sheet, i-Plastic Mirror Sheet - i-Donghua
I-DHUA yasekwa ngo-2000 ukubonelela nge-acrylic sheet ekumgangatho ophezulu, iphepha lesipili le-acrylic kunye neeplastiki zesipili ezahlukeneyo.
Rhoqo yenza iimveliso ezikumgangatho ophezulu
Ukuthintela inkungu kufakwa kwisipili esine-Dhua ekumgangatho ophezulu kwigumbi le-10 elicocekileyo. Isibuko esikhusela inkungu siyenzelwe ukumelana nenkungu phantsi kweemeko ezinzima. Ihlala isetyenziswa kwizipili zokucheba / zokuhlamba, izibuko zamazinyo, kunye ne-sauna, izicelo zeklabhu yezempilo. Igama leMveliso Isibuko sokulwa nenkungu, Isibuko esingenaNkungu, Isibuko samahhala seZiphathamandla sePolycarbonate (PC) Umbala ocacileyo weSayizi yeSheet 915 * 1830mm, ubungakanani besiko lokusika kubukhulu 1.0 - 6.0 mm Ukufihla iMicrosoft yePilfilm MOQ ...
Isibuko seConvex soKhuseleko noKhuseleko, Isibuko seNdlela esiThuthi seNdlela Isipili esiyi-convex sisipili esibonisa umphezulu (okanye nawuphina umphezulu obonakalisiweyo ofakwe kwinxalenye yesigaba) apho icala laso elijingileyo lijongene nomthombo wokukhanya. Ibonisa umfanekiso we-engile ebanzi kubungakanani obuncitshisiweyo ukwandisa indawo yokujonga ukunceda ukwandisa ukubonakala kwiindawo ezahlukeneyo zokhuseleko okanye ukujonga ngokufanelekileyo kunye nezicelo zokujonga. I-DHUA ibonelela ngezipili ze-convex ezisemgangathweni ezibonelela ngokugqwesileyo ...
Ukuxhamla ekubeni lula, impembelelo, ukumelana nokuqhekeka, ukubiza okungabizi kakhulu kunye nokuhlala ixesha elide kuneglasi, iishiti zethu zesipili ze-acrylic zinokusetyenziswa njengenye yezipili zemveli zeglasi kwizicelo ezininzi nakwimizi-mveliso. Njengazo zonke ii-acrylics, iishiti zethu zesipili ze-acrylic zinokunqunyulwa ngokulula, zigrunjwe, zenziwe zenziwe kunye ne-laser. Iimakhishithi zethu zesipili ziza ngemibala eyahlukeneyo, ubukhulu kunye nobukhulu, kwaye sibonelela ngokusika kwisayizi esipilini. Igama lemveliso Cacisa i-acrylic plexiglass mirror ...
Cacisa i-Plexiglass Acrylic Sheet, i-Transparent Plastic Sheet ye-Acrylic, ekwabizwa ngokuba yi-Plexiglass, yi-thermoplastics kwaye ihlala inikezelwa kumashiti njengenye indlela elula okanye enganyangekiyo enganyangekiyo kwiglasi. Cacisa ii-Acrylic Sheets zibonisa iimpawu ezifana neglasi-ukucaca, ukuqaqamba, kunye nokungafihli-kodwa kwisiqingatha sobunzima kwaye amaxesha amaninzi ukuxhathisa iglasi. Kulula ukuyila, ukubopha kakuhle ngokudibanisa kunye nokunyibilikisa, kwaye kulula ukuba wenze i-thermoform ngaphandle kokulahleka kokucaca kokukhanya. I-Donghua ikakhulu ...
Amabala e-Mirror e-Acrylic e-Colors, uMbala oBoniswe nge-Acrylic Plexiglass Sheet Ukuxhamla ekubeni ungasindi, ifuthe, ukumelana nokuqhekeka, ukubiza okungabizi kakhulu kunye nokuhlala ixesha elide kuneglasi, iimakhishithi zethu zesipili ezinokusetyenziswa njengenye indlela kwizipili zemveli zeglasi kwizicelo ezininzi nakwimizi-mveliso. Njengazo zonke ii-acrylics, iishiti zethu zesipili ze-acrylic zinokunqunyulwa ngokulula, zigrunjwe, zenziwe zenziwe kunye ne-laser. Iimakhishithi zethu zesipili ziza ngemibala eyahlukeneyo, ubukhulu kunye nobukhulu, kwaye sibonelela ngokusika -...
I-Gloss High PETG Mirror Sheet, i-PETG Mirror Sheet sheet ye-PETG yesiphepha yiphepha leplastiki eliguqukayo eliqheleke kakhulu lisetyenziswa kwezobunjineli, izinto zokuthambisa, izitya zokugcina, nangaphezulu njengoko kusenziwa ngokulula kwi-thermoformed kwaye kusikwa ukwenza iimilo ezinzima ngeenkcukacha ezichanekileyo. Isibuko se-PETG sibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokucaca okuphezulu, ukugcinwa kwe-gloss surface, ukungabikho mhlophe koxinzelelo, ukwamkela i-inki kunye nepeyinti, kwaye i-FDA-yamkelwe kunxibelelwano lokutya. Iphepha lesibuko sePETG linikezela ngezinto ezingafaniyo ...
IParcarbonbonate Mirror, Mirror PC, Mirrored Iphepha lePolycarbonate Njengoko kusaziwa, isipili sepolycarbonate yeyona substrate inganyangekiyo. Isipili sethu se-polycarbonate (PC) lukhetho olufanelekileyo ukuba ufuna umphezulu obonisiweyo ngobushushu obuphezulu kunye namandla eempembelelo. Ezinye zezibonelelo zesipili sethu se-polycarbonate ziimpembelelo ezinamandla aphezulu, ukuhlala ixesha elide, ukumelana nobushushu obuphezulu, ukucaca kwekristal kunye nokuzinza okubonakalayo. Sino-0.25 ~ 6 mm ubukhulu, 915 * 1830 mm ubukhulu, umbala ocacileyo wesilivere ...
Isipikha sodonga, Isincamathelisi esenziwe ngeglasi esuswayo se-DIY Wall Mirror Isibuko esingasiyiyo isipili seglasi seNdlu yokuHlala kwigumbi lokulala Igumbi lokuhombisa elihle lokuhombisa ikhaya lakho okanye iofisi liya kunika igumbi lakho ukubukeka okuhlaziyayo, lenze imeko enomdla kwaye inike umdla omangalisayo ngaphakathi. Isiphatho sesincamathelisi sesipili sikaDhua senziwe ngeplastikhi ye-acrylic, umphezulu uyabonakalisa kwaye umva uneglu ngokwawo; Kukho ifilimu ekhuselayo kumphezulu wesipili ukukhusela isibuko ...
Nceda ushiye umyalezo kuthi kwaye siya kuba kwebala zingadlulanga iiyure eziyi-24.
I-Thermoplastics yindawo efanelekileyo yokubonisa kunye nokutsha. Ukukhetha kwethu umgangatho ophezulu, iphepha le-acrylic eliguqukayo kunye neemveliso zesipili zeplastiki kunceda abayili bazise imibono yabo yoyilo ebomini. Sinikezela ngemibala eyahlukeneyo, ubukhulu, iipateni, ubungakanani bephepha kunye nefomula yokuhlangabezana neemfuno zobugcisa obuninzi kunye nokusetyenziswa koyilo. Sinikezela ngokukhetha okukhulu kuyilo lwe-acrylic kunye nokuveliswa kweentengiso kunye namashishini kunye nokuhonjiswa kwasekhaya kunye noluhlu olubanzi lwe ...
Iinkcukacha zeMveliso Ii-Acrylics ziipolymers ze-methyl methacrylate (PMMA), eneempawu ezininzi eziluncedo kwimiboniso kwimiboniso yorhwebo okanye kwimiboniso yokuthenga. Zicacile, zilula, zilukhuni kwaye ziyanyangeka, zingenziwa ngokwezifiso, kulula ukuzenza kwaye kulula ukuzicoca. Amathuba ngee-acrylics aya ngaphaya kwemiboniso yorhwebo. Ii-acrylics lukhetho oludumileyo lwezinye izinto ezinje ngeevenkile ezinje ngee-mannequins, imiboniso yeefestile, iirack okanye iishelufa ezixhonywe eludongeni, ukujikeleza imiboniso yetafile kunye neempawu ...
Iinkcukacha zeMveliso I-Acrylic ifumene ukuthandwa ngaphezulu kweglasi yokwenza ifreyimu kwiminyaka yakutshanje ngesizathu esivakalayo. ● Iyaphuka kwaye ilula, ngokwahlukileyo kwiglasi. Olu phawu lwenza i-acrylic ikhetheke kubafoti abasebenza nabantwana kunye neentsapho - ngakumbi iintsana. Ukuxhoma isakhelo ngepaneli ye-acrylic kwindawo yokugcina izinto okanye kwigumbi lokudlala kukhuseleke ngakumbi kunenye indlela yeglasi, kuba akunakulimaza mntu ukuba inokuwa. ● Ukongeza, i-shatterproof kunye ne-lightweigh ...
Iinkcukacha zeMveliso Izinto eziqhelekileyo ezisetyenziselwa ukukhanya kwezibane zii-acrylic kunye ne-polycarbonate. I-acrylic plexiglass kunye ne-polycarbonate amashiti omelele kwaye azinzile amashiti eplastiki anokubonakalayo okuphezulu komgca. I-DHUA ikakhulu ibonelela ngamashiti e-acrylic kwisicelo sakho sokukhanyisa. I-acrylic yethu yebakala ebonakalayo isetyenziselwa ukwenza iPhaneli yokuKhanya yokuKhanya (LGP). I-LGP yiphaneli ye-acrylic ecacileyo eyenziwe kwi-100% ye-Virgin PMMA. Umthombo wokukhanya ufakwe kwimida yawo. Yenza i ...
I-acrylic yenye yezona zinto zixhaphakileyo ezisetyenziselwa ukwenza umboniso wePOP, ngakumbi kumashishini afana nezimonyo, ifashoni kunye nobuchwephesha obuphezulu. Umlingo we-acrylic ecacileyo ilele kumandla ayo okunika umthengi ukubonakala okupheleleyo kwemveliso ethengiswayo. Yinto elula ukusebenza nayo kuba inokubunjwa, isikwe, ifakwe kumbala, yenziwe kwaye incanyathiselwe. Kwaye ngenxa yomphezulu wayo ogudileyo, i-acrylic yinto entle onokuyisebenzisa xa ushicilela ngokuthe ngqo. Kwaye uya kuba nakho ukugcina imiboniso yakho y ...
Izixhobo zomqondiso ezivela kwi-DHUA zigubungela iibhodi zeebhodi, amanqaku ebhodi, uphawu lwevenkile ethengisa kunye nemiboniso yentengiso yesitishi. Iimveliso eziqhelekileyo zibandakanya imiqondiso engeyiyo yombane, iibhodi zebhodi zedijithali, izikrini zevidiyo kunye neon. I-Dhua ikakhulu ibonelela ngezinto ze-acrylic ezifumaneka kumgangatho osemgangathweni, kunye namashiti okusika kunye nobungakanani kunye nokwenza okungafunekiyo kwesicelo seempawu. Iimpawu ze-acrylic liphepha leplastiki eligqibeleleyo. Iza ngemibala eyahlukeneyo kubandakanya iqabaka kwaye icacile. Olu hlobo lophawu l ...
I-DHUA yenza ukhuseleko kunye nezibuko ezikhuselekileyo, izibuko ezingaboniyo kunye nezibuko zokuhlola ezenziwe kwiphepha lesipili se-acrylic elisindayo, elichithakeleyo elichasene nokucaca okugqwesileyo. Izipili ze-DHUA ze-convex zisetyenziselwa ukuthengisa, ukugcina, isibhedlele, iindawo zikawonke-wonke, ukulayishwa kweedokodo, iindawo zokugcina, iindawo zokuhlala, indawo yokuvelisa, iigaraji zokupaka kunye nendlela esuka kwiindlela zokuhamba kunye neziphambuka. Izibonelelo zokusebenzisa isipili se-convex kukhuseleko kunye nokhuseleko zidweliswe apha ngezantsi: Khaphukhaphu, ...
Loluphi uhlobo lweZipili zePlastiki ezinokuthi zitshintshe iZipili zeglasi ngaphandle kokudodobala kwimeko yeendawo ezinkulu? Okokuqala kufuneka siziqonde ezona mpawu zezi zinto:
Intengiso yePlexiglass iyanda I-Plexiglass yinto eshushu ngesiquphe, njengoko imfuno yokuphambuka ekuhlaleni kunye nokukhuselwa inyukile. Oko kwakuthetha ukuphakama okukhulu kwishishini kumthengisi we-acrylic plexiglass. Ukukhawuleza kweefowuni kwaqala phakathi ku-Matshi. Njengobhubhane we-coronavirus otshayela ngokukhawuleza ...
Uyifaka njani i-Acrylic Mirror Sheet iphepha lesipili le-Acrylic elenza ukuba ulongezo olusebenzayo kunye oluhle kwiindonga, iingcango, ukungena kunye nokunye, ukongeza ukubamba okwangoku kuyo nayiphi na indawo oyifakayo. iglasi ngelixa s ...